ဆိုးရှား ကို စောစောစီးစီး ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း မရှိတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ရှက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ လို့ ပေါ်တင်ဝေဖန် လိုက်တဲ့ ကာရေဂါ - xyznews.co
ဆိုးရှား ကို စောစောစီးစီး ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း မရှိတာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ရှက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ လို့ ပေါ်တင်ဝေဖန် လိုက်တဲ့ ကာရေဂါ
ဆိုးရှား ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်ကာလတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယူနိုက်တက် ရဲ့ ကိုင်တွယ်ပုံကို ပြောရရင် “ “ရှက်စရာကောင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားကလွဲလို့ အခြား မရှိတော့ပါဘူး။
သူတို့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ လုံး၀ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေချည်းပဲ ဖြစ်နေတာ ရိုးရိုးလေး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် အသင်းကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ပြန်လည် တည့်မတ်နိုင်ဖို့ အတွက် ယာယီ မန်နေဂျာ2ယောက်ထိ ထားဖို့ ပြင်ဆင်နေသလို ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပိုချက်တီနို ကို အဓိက ပစ်မှတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြန်တယ်တဲ့လေ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေ ကစားတာ3ပုံ တစ်ပုံတောင် မရောက်သေးပါဘူး ၊ အဲဒီ ကာလမျိုးမှာ ယူနိုက်တက် လို အသင်းမျိုးက ယာယီ မန်နေဂျာ နှစ်ယောက် နဲ့တဲ့ဗျာ..
သူတို့ဟာ ဘာဖြစ်လို့ အခုလောက်အထိ ဇောက်ထိုးဆင်းသွားခဲ့တာလဲ ၊ အသင်းအောင်မြင်မှုတွေကို ပြန်လည် အကောင်ထည်ဖော်ပေးမယ့် အစီအစဉ်တွေက ဘာတွေလဲ?
အိမ်ကွင်းမှာ လီဗာပူး ကို ဂိုးပြတ် ရှုံးနိမ့်ပြီး ကတည်းက ၊ လက်ရှိ ပုံစံအတိုင်း မဟန်တော့ဘူး ဆိုတာ ထင်ရှားလွန်းနေခဲ့ပါပြီ။ နည်းပြ အပြောင်းအလဲ လုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ သတင်းမျိုးက ကလပ်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ လုံးဝကို ပျံ့နှံ့နေရမှာပါ။ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ် ကာလ က အဲဒီလို အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေး ရှိခဲ့တာပဲလေ။ စပါး ၊ အက်စ်တွန် ဗီလာ ၊ နော့်ဝှစ်ချ် အသင်းတွေတောင် ကလပ်ပွဲစဉ်တွေ နားနေတဲ့ အခိုက်အတန့်ကို အခွင့်ကောင်း တစ်ခုလို့ မြင်ပြီး နည်းပြ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ခဲ့ကြချိန်မှာ ၊ ယူနိုက်တက် က ဘာမှ မလုပ်ပဲ ငြိမ်နေခဲ့တာ ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
စပါး ဆိုရင် ကွန်တီ လို နည်းပြမျိုးကို ရအောင် ဆွဲခန့်ပြသွားခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဆက်တိုက် ဝေဖန်မှုတွေ ခံနေရတဲ့ ဒန်နီရယ် လီဗေး က သူ့ဆီလာမယ့် ဝေဖန်မှုတွေ အားလုံးကို ၊ ယူနိုက်တက်ဆီ အာရုံ လွှဲပေးလိုက်သလိုပါပဲ။
ကွန်တီ ဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ရာထူးကို လက်ခံဖို့ စောင့်မျှော်နေခဲ့လား ၊ ယူနိုက်တက် ကရော စိတ်ဝင်စားမှုတွေ ရှိခဲ့လား ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှ သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ဂယ်ရီ နဗီးလ် လို တချို့သော ယူနိုက်တက် ဘက်တော်သားတွေကတော့ ကွန်တီဟာ သူတို့ အသင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှု မရှိဘူး ဆိုပြီး ပြောကြတယ်။ ဘောလုံး လောကရဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့် ဝေဖန်သုံးသပ်သူတွေ ကတောင် အဲဒီလိုမျိုး ပြောကြတော့ ယူနိုက်တက် က ဘာကို လိုချင်နေတာလဲ?
သူတို့ ဟာ နောက်ထပ် ဖာဂူဆန် လက်သစ် နည်းပြ တစ်ယောက် ထပ်ရှာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်နေတလား? နောက်ထပ် 25 နှစ် သက်တမ်း အထိ ကိုင်တွယ်ပြနိုင်မယ့် နည်းပြမျိုး ပေါ်လာဦးမယ်လို့ ထင်နေကြလား?
အိပ်မက်တွေ မက်မနေကြပါနဲ့ဗျာ……….ဘောလုံး လောက ဟာ အများကြီး ပြောင်းလဲ သွားပါပြီ။ အဲဒီလို မန်နေဂျာမျိုးတွေလဲ မရှိတော့ပါဘူး။
လက်ရှိ ဥရောပ ရဲ့ အောင်မြင်မှု အများဆုံး ကလပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ ၊ ရီးရဲ မက်ဒစ် ၊ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် တို့လို အသင်းတွေတောင် 3-4 နှစ် သက်တမ်းလောက်ပဲ ခန့်အပ်ကြတော့တာပါ။ ခြွင်းချက် အနေနဲ့ ပက် ၊ ကလော့ပ် တို့ဟာ သူတို့ ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အသင်းတွေဆီမှာ 8-9 နှစ် လောက် ဆက်ပြီး ရှိနေကြပါလိမ့်မယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ကတော့ ဒီထက်တောင် ပိုပြီး ဆက်ရှိစေချင်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံး လောကမှာ ဒါမျိုး နည်းပြတွေ ထပ်မတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ် အတွင်း ယူနိုက်တက်ဟာ ထိပ်တန်း နည်းပြကောင်း တော်တော်များများ ကို လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ထဲမှာ ကွန်တီ ၊ ပိုချက်တီနို ၊ သောမတ် တူချယ် တို့လို့ ချက်ခြင်း အောင်မြင်မှုတွေ ဖန်တီးပြမယ့် နည်းပြမျိုးတွေထဲမှာ ပါနေပါတယ်။
အဲဒီ အစား သူတို့ ပြောနေကြ စကားလုံးက အသင်းကို “တဖြေးဖြေး နဲ့ တည်ဆောက်နေတယ်တဲ့ဗျာ” ။ ဆိုးရှား အောက်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပမာဏ က ပေါင် 312 သန်းပါ။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေ ထဲမှာ အဲဒီ အပိုင်းအခြား ကာလအတွင်း အများဆုံး ပမာဏ ဖြစ်သလို ၊ လစာ ပေးချေမှု အားဖြင့်လဲ အမြင့်ဆုံး ရှိခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီး နဲ့ ချဲဆီး တို့သာ အဲဒီလောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်ကြမယ် ဆိုရင် ချက်ခြင်း အောင်မြင်မှုတွေကို ရအောင် ရှာပေးဖို့ ပြန်တောင်းဆိုကြမှာပါ။ ယူနိုက်တက် အနေနဲ့လဲ အဲဒီအတိုင်း လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးရှား က သူ့ရဲ့ နှုတ်ဆက် အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားတာက “ သူ စတင် ကိုင်တွယ်စဉ်က အခြေအနေထက် ပိုကောင်းတဲ့ အနေအထား တစ်ခုကို ရောက်အောင် ဆွဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်” လို့ ပြောသွားတယ်လေ။ သူ့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ရော အဲဒီ အဆင့်မျိုး ရောက်ရဲ့လား ဆိုတာ သုံးခဲ့တဲ့ ငွေကြေး ပမာဏတွေ နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး အငြင်းအခုန် လုပ်ဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။
တကယ်ဆိုရင် ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဗီလာရီးရဲ ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အချိန် ကတည်းက ယူနိုက်တက် လူတွေ အနေနဲ့ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်။ ဆိုးရှား ဟာ ထိပ်တန်း နည်းပြကြီးတွေ နဲ့ ပုခုံးချင်း ယှဉ်နိုင်မယ့် အရည်သွေးမျိုး မရှိပါဘူး။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ အူနိုင်း အမ်မရီ ရဲ့ အသင်းကိုတောင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှတော့ ကလော့ပ် နဲ့ ပက် ကို ယှဉ်ဖိုက်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး မျှော်လင့်လို့ ရမလဲ။
အများစု ကတော့ ဆိုးရှား ရဲ့ လက်ထက်မှာ အသင်းရဲ့ အခြေအနေက ပိုကောင်းလာတယ် ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ အသင်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် နဲ့ ရလာဒ် ပိုင်းက တကယ်ရော တိုးတက်လာတာ ဟုတ်ရဲ့လား ဆန်းစစ် ကြည့်သင့်ပါတယ်။
မော်ရင်ဟို ဟာ ယူရိုပါလိဂ် နဲ့ ကာရာဘောင် ဖလားကို ရအောင် ယူပေးခဲ့သလို ၊ လူးဝစ် ဗန်ဟား ကလဲ အက်ဖ်အေ ဖလား ကို ဆွတ်ခူး ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ မော်ရင်ဟို လက်ထက် ပရီးမီးယားလိဂ် ဒုတိယ နေရာကို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာလဲ မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
ဆိုးရှား က သူ့ရဲ့ နည်းပြဘဝမှာ လီဗာပူး ကို ကျော်လွန်ပြီး ဒုတိယ နေရာကို ရယူနိုင်အောင် လုပ်ပြခဲ့တယ် ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်အင်တာဗျူးမှာ ပြောသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ လီဗာပူး ဟာ နောက်တန်း ကစားသမားတွေ အားလုံး ဒဏ်ရာနေတဲ့ အတွက် အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာပါ။ သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်လို့ တရားသေ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။
အခုဆိုရင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ မရှိခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် ဟာ နောက်6လ အချိန်ကာလကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
ယူနိုက်တက် ဟာ ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ အခမ်းနားဆုံး ကလပ်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ အဲဒီ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ ညီအောင် ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်ပြရမယ့် အချိန်ကာလမျိုး ရောက်နေပါပြီ။
(ကာရေဂါ ရဲ့ ဆောင်းပါး ကို မှီငြမ်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်)
Previous Article သူ့ရဲ့ စံချိန်တွေကို ချိုးဖျက်နေတဲ့ မိုဆာလားနဲ့ ပက်သက်ပြီး ချဲလ်ဆီးဂန္တဝင် ဒရော့ဘာရဲ့ တုန့်ပြန်မှု
Next Article “ဆိုးရှား ကို ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ၊ ရိုနာဒို ကြောင့် သူ့ရဲ့ အစီအစဉ်တွေ အကုန်လုံး ပြောင်းလဲ လိုက်ရတာပါ” ပေါလ်မာဆွန်